Qiyaasta Bulshada ee ku jirta Dashboard-kaaga WordPress | Martech Zone
Qiyaasta Bulshada Pro waa plugin WordPress ah oo lacag la siinayo oo dabagal ku sameysa tweets, like, pin, + 1s iyo wax badan oo saxan oo ka socda dashboardkaaga WordPress!
Noocyada 'Social metrics Pro'
Lasoco calaamadaha bulshada ee aad daryeesho - Dashboard si aad u kormeerto dhaqdhaqaaqa bulshada guud ahaan shabakadaha warbaahinta bulshada sida Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, StumbleUpon iyo LinkedIn. Adiga ayaa dooranaya shabakadaha aad rabto inaad raadiso.
Midabada Lagu Tilmaamo Caannimada Qaraabada - Social metric Pro isboorti qaab-qaabeyn shuruudaysan. Boostada leh tirada ugu badan ee saamiyada waxay muujinayaan cagaar. Qoraallada leh dhaqdhaqaaqyada warbaahinta bulshada oo hooseeya waxay muujinayaan amber iyo casaan. U rogo casaanka cagaarka waxaadna u socotaa guusha warbaahinta bulshada.
Widgets iyo Extensions Diyaar - Waad ku dheereyn kartaa shaqeynta adoo adeegsanaya aaladda widget-ka ee gudaha iyo dibedda ka ah. Eeg tirooyinka ugu dambeeyay ee ku yaal dashboardkaaga 'WordPress', Ka gal dashboardka ka yimid barta maamulka ee WordPress iyo xitaa soo bandhig waxyaabahaaga caanka ah ee bulshada caan ka ah ee ku yaal boggaaga bogga ama meel kasta oo ka tirsan boggaaga.
Kalasooc, Raadi, Sifee qaabka aad rabto - Kala sooc xogtaada si aad u ogaatid qoraalada sida ugu fiican ugu shaqeynaya shabakadaha bulshada. Samee raadinta ereyga muhiimka ah si aad u barato qoraallada la xiriira mowduucyada qaarkood. Sifee nooca boostada, qaybta, taariikhda daabacaadda ama qorayaasha boostada.
U dhoofi Excel si aad uhesho Falanqeyn Dheeraad ah - Social metrics Pro waxay kuu ogolaaneysaa inaad dhoofiso shaandhada, xogta la kala soocay iyo weydiimaha gaarka ah ee Excel. Waxaad kuheli doontaa xog qaabab feyl ah oo xaddidan iyo jajab. Waxaad isticmaali kartaa Excel ama processor kasta oo waraaqo ah oo aad dooratay.
Is-cusbooneysiin karti leh - Social metrics Pro waxay taageertaa 1-guji shaqeynta otomaatiga otomaatiga. Waxaad ku cusbooneysiin kartaa barnaamijkaaga 'Social Metrics Pro' hal guji adigoo adeegsanaya bogga Cusbooneysiinta WordPress, ama waad ku cusbooneysiin kartaa gacanta haddii aad jeceshahay. Waxaad ikhtiyaar u dooran kartaa inaad hesho ogeysiis emayl markasta oo nooc cusub la sii daayo.
Shaacinta: Xiriirkeenna xiriirka ee Social metrics Pro ayaa lagu soo daray boostadan.
Tags: cabirka bulshada proplugin bulshadaplugin WordPresswordpress plugin bulshada
Jun 28, 2013 saacadu markay ahayd 8:50 AM
Waad ku mahadsan tahay daabacaadda maqaal kale oo weyn annaga. Tani waxay ugufiican tahay baloog kasta oo farsamo laxiriira.